Xildhibaan Sharmaarke Garaad oo eedda kooram la’aanta fadhiyada golaha ka weeciyay xildhibaanada ku jira xukuumadda – Kalfadhi
Xildhibaan hab-dhawre Sharmarke Garaad Saleebaan oo ka tirsan golaha shacabka JFS ayaa sheegay in ay arbacada rajaynayaan in uu si wanaagsan u qabsoomo fadhiga golaha shacabka Soomaaliya, kadib kulamadii Sabtida iyo Isniinta ee golaha oo kooram la’aan u baaqday.
Wuxuu sheegay in xildhibaano badan oo maqnaa ay dib u soo noqdeen isla markaasna la rajaynayo in ay kooramka buuxiyaan. Wuxuu eedda baaqashada kulamada ka weeciyay xildhibaanada xukuumadda ku jira oo uu sheegay in uusan kooramku u baaqan karin, qaarkoodna ayba saxiixeen diiwaanka ka qaybgalka kulamadii Sabtida iyo Isniinta.
“230 iyo dhawrka xildhibaan ee kale oo aan wasiiradda ahayn ayay ugu yaraan ahayd in ay kooramka buuxiyaan haday xataa wasiiradu maqan yihiin” ayuu yiri Xildhibaan Sharmarke oo la hadlay BBC Somali.
Docda kale, xildhibaan Sharmarke Garaad ayaa u sheegay warbaahinta Kalfadhi in kulanka guddiga joogtada ah ee golaha shacabka oo bilawday shalay galab isla markaasna lagu gaaray in fiidkii xalay aad looga hadlay arrimaha ajandaha kulanka koowaad ee kalfadhiga shannaad.
Xildhibaano ka mid ah baarlamanka ayaa horraantii toddobaadka guddiga u gudbiyay soo jeedin ah in kulanka koowaad ee golaha looga hadlo arrimaha amniga Muqdisho oo toddobaadyadii dambe sii xumaanayay.
Xildhibaan Jeesow "Waligeey xiriir gaar ah lama yeelan Xukuumadda"